Sisoloko sikhangele kwizixhobo ezikhulu kwaye sinomzi-mveliso wezigidi ezi-5 zeedola, i-SEO yimarike enye enetoni yezixhobo zokukunceda. Nokuba wenza uphando kuwe okanye kwi-backlinks yakho okhuphisana nayo, uzama ukufumanisa amagama aphambili kunye nemigaqo ye-cocurrence, okanye uzama nje ukubeka esweni ukuba indawo yakho ikwindawo enjani, nazi izixhobo ezithandwayo ze-SEO kunye namaqonga kwintengiso.
Ukufunyanwa kwegama elingundoqo Ngelixa uninzi lwamaqonga okubeka iliso ekubonelela ngezikhundla ezichanekileyo, azikuvumeli ukuba ufumane ukuba ngawaphi amagama aphambili onokuthi ubekwe kuwo ongawaziyo.
Uphando elingundoqo -Ukuqonda igama eliphambili elinxulumene neemveliso kunye neenkonzo ozinikezelayo kubalulekile kwimizamo yakho yokuthengisa umxholo. Izixhobo zophando zegama eliphambili zihlala zibonelela ngokudibana kwamagama aphambili, indibaniselwano yamagama aphambili anombuzo, indibaniselwano yamagama aphambili anomsila, kunye nokhuphiswano lwegama eliphambili (ukuze ungachithi ixesha lakho uzama ukulinganisa ngokwemigangatho ongayi kuma kuyo ukufumana Ukutsalwa okuvaliweyo.
Impembelelo yasekuhlaleni -Kuyinto yokwemvelo ukuba ingqalelo onomdla kuyo kwimidiya yoluntu sisalathiso esikhulu segunya olakhayo ngeinjini zokukhangela. Amaqonga amatsha e-SEO abonelela ngengqondo kunxibelelwano phakathi kophando kunye noluntu kwaye kuyahlawula!
Uphando lwe-YouTube -Ihlala ihoywa, i-YouTube yi- # 2 yokukhangela emhlabeni njengamashishini amaninzi nangakumbi kunye nabathengi ngezihloko zophando abafuna iinkcazo zevidiyo, iiprofayili zemveliso kunye nendlela yokwenza ngayo.
Umhloli weNetpeak -Isixhobo sophando esinemisebenzi emininzi yohlalutyo lwe-SEO ngobuninzi. Isixhobo sinento eyahlukileyo evumela ukuhlalutya isicwangciso sokukhuthaza abantu abakhuphisana nabo kunye nophando lweprofayile ye-backlinks kwiiwebhusayithi okhuphisana nazo.
ISeoSiteCheckup.com -Ukusebenziseka kweNjini yokukhangela yenziwe ngokuLula. Uhlalutyo lomsebenzisi-oluhle kunye nokubeka iliso kwi-SEO yendawo yakho.
SpyFu ityhila indlela yokuthengisa eyimfihlo yokuthengisa okhuphisana nabo baphumeleleyo. Khangela nasiphi na isizinda kwaye ubone yonke indawo abayibonisileyo kuGoogle: onke amagama aphambili abawathengileyo kwiAdwords, onke amanqanaba e-organic, kunye nazo zonke iintlobo zentengiso kule minyaka mithandathu idlulileyo.
tags: ImpazamoahrefsAsia seoIilebhu zabasemagunyeniigunyaUhlalutyo lwe-backlinkukufunyanwa kwe-backlinkinkonzo backlinkukuxhuma umvakukunikaEsona sixhobo sokubeka elona gama liphambiliEzona zixhobo ze-intanethi kwi-intanethibing abaphathi bewebhuukukhanyaeqaqambileyo seobrightedge vs umqhubijonga igama eliphambilijonga uhlobo lwegama elingundoqojonga amanqanabajonga uluhlu lweinjini yokukhangelajonga indawo ekuyoColibriikholibri seoizixhobo ze-colibri seouphando lokhuphiswanocuutiodiyseoIimpawu zeDragoniIsikhululo somlilo somliloIsikhundla samagama aphambili asimahlaIsitshixo samagama aphambili asimahlaUluhlu lwamagama asimahlaisixhobo samagama esingundoqo samahhalaukulandelwa kwamagama aphambili asimahlaIsikhundla sokujonga simahlatracker yasimahlaIsikhupheli simahla serenkiiginzametricsIsixhobo sokulandela umkhondo segama eliphambili kuGoogleIsikhundla sokulandelela kuGoogleUGoogle google rank checkerI-google webmastersgshiftIilebhu zegshiftzintsiukujonga njani inqanaba elingundoqourhwebo inboundUlawulo lwegama elingundoqoIsixhobo solawulo lwamagama aphambiliIndawo ephambili yokulandela umkhondoUkulandela umkhondo wegama elingundoqoelingundoqo umphathi weprojekthiigama elingumlinganiso ophambiliIsixhobo segama lokujonga igamaisoftware yamagama aphambiliI-tracker yenqanaba eliphambiliUkulandela umkhondo wegama eliphambiliIsoftware yokulandelela isoftwareUluhlu lwamagama aphambiliIngxelo yamagama aphambiliiingxelo zenqanaba eliphambiliIsoftware ekumgangatho ophambiliIsixhobo esingundoqo sokubeka indawo simahlaizixhobo zegama elingundoqoI-tracker ekumgangatho ophambiliisixhobo sokubekwa kwamagama aphambiliyophando ngegama elingundoqoIsixhobo sokucebisa ngegama eliphambiliizixhobo zamagama aphambiliukulandelwa kwegama elingundoqoisoftware yokulandela igamaIsixhobo sokulandela umkhondo wegama elingundoqoizixhobo zokulandela umkhondo wamagama aphambiliukwakha ikhonkcoiqhagamshelamkhuluenkulu leyoi-meta forensicsukubeka iliso kwizikhundla zeinjini yokukhangelaUmhloli wenqanaba lemozUmvavanyi womnathaUmkhangeli wenqanaba onlineUkulandela umkhondo kwinqanabaisixhobo esikwi-intanethiintoloiphepha lokuqala seoumkhweli wephephangasemvaUmlandeli wenqanabaUmvavanyi wenqanabaisikhundla sokujonga chromeIsixhobo sokujonga kwinqanabaIsoftware yokujonga inqanabaisixhobo sokujonga inqanabaigama eliphambiliIsoftware ekumgangathoumkhondo wenqanabaIsikhundla somkhondo simahlaindawo tracker seoIsoftware yokulandela umkhondoIsixhobo sokulandela umkhondoukulandelela inqanabaIsoftware yokulandela umkhondoisixhobo sokulandela umkhondoizixhobo zokulandela umkhondoinqanaba lokujongaIsikhundla sokujongaIsoftware yokunika ingxeloisoftware ekumgangathoizixhobo zokubekaindawo trackerisikhundlairenkiwcdlwebukujongangcwabaIzixhobo zeRavenzenzakisiisikhundla sexesha lokwenyaniingxelookoSe Intelusezingeniindawo yokukhangela indawo yokukhangelaInjini yokukhangela trackerukukhangela kwinqanaba lenjini yokukhangelaisoftware ekumgangatho ophezulu yokukhangelaisoftware yeenjini yokukhangelaukukhangela kwinqanaba lokukhangelasemrushUhlalutyo lwentoloo AsiaUmhloli wenqaku lencwadi leyoizixhobo zencwadi leyoIsikhangeliinkamelaisixhobo esingundoqo sokubeka inqakutracker igama elingundoqoUkulandela umkhondo wegama eliphambiliIsixhobo solawulo seoizixhobo zokubeka esweni okoamaqonga seoUmhloli wendawo yokumaUmkhangeli wenqanabaukubeka iliso kwinqanabaingxelo yenqanaba leloIsoftware ekuyoisixhobo serenkiizixhobo zerenkiIndawo ekuyo umkhondoUkulandela umkhondo wenqanabaUmkhangeli osemgangathweniesweni ukubeka esweniIsoftware yokufaka ingxeloIsoftware ekuyoisixhobo sokubekaizixhobo ezikumgangatho ophezuluIsikhundla sokulandela umkhondoIsoftware yengxeloIsoftware yokunika ingxeloIsixhobo esikumgangatho wokujonga isixhobozixhoboIzixhobo ze-seo zijonga indawoOko trackerUkulandelaIsoftware yokulandela umkhondoisixhobo sokulandela umkhondoizixhobo zokulandela umkhondoUmvavanyi wenqanaba leencwadi zencwadijongangokwelka.iookomozokomoz proseomoz izixhobo proseomoz izixhoboUkutshizaUhlalutyo lwenyokaUkuskena i-serpiiserpsserps.comimephuyeserubeuluhlu olufutshanemzobospyfuumhloliindawo encinciumphathiukulandelela ii-imeyileUkulandelela amagama abalulekileyotrack amagama aphambiliisixhobo segama eliphambili le-twitterunamoukukhuselekaIsoftware ekumgangatho wewebhuwebmeupIsoftware ekumgangatho wewebhusayithiwordtrackerAmagama aphambili e-YouTube
Luluhlu oluhle olo. Uhamba nje ukubonisa ukuba kungakanani ekusafuneka ndifunde malunga ne-SEO!
Uluhlu olukhulu, enkosi. Kodwa ndicinga ukuba i-webceo ilahlekile, yiseti entle yezixhobo ze-seo ezikwi-intanethi ukuphicotha iwebhusayithi yakho kwaye emva koko uyayenza.
Molo Zac, ndijonge iWebCEO kwaye liqonga ledesktop leWindows. Sigxile kwizixhobo ze-intanethi apha. Enkosi!
Ngokuqinisekileyo yindawo yentengiso exineneyo - kwaye olu luhlu luphezulu nje komkhenkce! Ukuba unqwenela ukwenza isithuba esifanayo kodwa ngokuthe ngqo kwizixhobo ze-SEO zasekhaya ke nceda usazise-singavuya ukufaka igalelo kumxholo kunye nokunceda ngokulungiswa. Enkosi Douglas
Hee, thina kwaSERP Scan sisandula ukukhupha indawo yokujonga indawo. Naliphi na ithuba lokubandakanya nathi Douglas? Enkosi!
Ihlaziywe, ibonakala ngathi sisixhobo esihle kakhulu.
Enkosi uMichael! Ndiyifake kuluhlu.
Enkosi ngokubandakanya iWebMeUp, Douglas!
Ngendlela, songeze imodyuli yeMedia yeNtlalo kwiWebMeUp. Ke, umntu unokuthi asisiyo isoftware ye-SEO ngoku. 😉
Jun 24, 2013 ngo-1:01 AM
Ndisebenzise izixhobo ezimbalwa ukulandelela amanqanaba kubathengi bethu kodwa ndidinga ingcebiso kwisixhobo esinokulandela umkhondo wamagama angundoqo angenamkhawulo. Sidinga enye ye-e-commerce portal enamashumi amawaka amagama angundoqo okulandelela.
Jun 24, 2013 ngo-8:24 AM
Abathengi bethu abasebenza ngolo hlobo basebenzisa i-Conductor, @disqus_wFlYDncKKH:disqus. Ayibizi kakhulu kodwa ineemodyuli ezilungileyo zamaqela kunye neengxelo. Ungathenga nezakho izikripthi zokulandela umkhondo - kodwa asiyontliziyo etyhafileyo njengoko iinjini zokukhangela zizama ukuvala ezi nkonzo kangangoko.
Uluhlu lwe-SEO olugqwesileyo lweSixhobo sikaDouglas! IWebMeUp ibe yenye yezinto endizithandayo. Imakethi eyothusayo uSamurai akazange enze uluhlu olufutshane?
Indawo yeMarike ye-LXR inoluhlu olude lwezixhobo ezikhulu ezenziwe lula kubanini bamashishini amancinci abafuna ukwenza eyabo i-SEO
NgoJulayi 23, 2013 ngo-3:21 PM
Uluhlu olukhulu! Abanye bebengaqhelanga kwaye kufuneka ndizame. Kwezi ndisebenzise iiSearchmetrics kakhulu, kodwa uCuutio kufuneka abe kuluhlu, naye, ndiyacinga (www.cuutio.com)
Aug 23, 2013 ngo-3:28 PM
Ndicinga ukuba ungajonga isixhobo sethu - positionly.com. Yithathe ujonge kwaye ujonge ngokwakho 🙂 Ndiqinisekile ukuba iya kuhlangabezana nemigangatho yakho.
Ngaphandle koko, ndiyawathanda amatye anje. Zonke izixhobo eziluncedo zidibene. Intle!
Aug 24, 2013 ngo-6:49 PM
Enkosi Kristian! Ukongeze kuluhlu.
Molo apho! uluhlu olukhulu ungaphinda uzame seo esweni isikhundla, ndiyayithanda ukuza kuthi ga ngoku..basanda kukhulula uguqulelo olutsha, leyo (ndicinga) ibonakala intle kakhulu.
Ngaba unokujonga ngokukhawuleza kwisisombululo sethu somhlaba apha https://www.serpwoo.com/?
Sinazo zombini iiakhawunti zasimahla kunye nezihlawulelwayo, kwaye sinikezela ngomkhondo wobukrelekrele be-SERP kumagama angundoqo asisiseko esiwalandelelayo onke amalungu.
Enkosi ngokujonga kwaye ndiyathemba ukuba ndingakwazi ukukunceda ngesisombululo sethu ukuba uyasifuna.
Kuhle, songeze isixhobo sakho kuluhlu.
Aug 15, 2014 ngo-2:01 PM
Molo, ngelishwa ayifumanekanga kuluhlu lwe http://rankinity.com. Ndisebenzisa le projekthi kuba ibeka umkhondo ngexesha langempela.
Aug 15, 2014 ngo-4:01 PM
Enkosi! Ndiyifakile kuluhlu!
Sep 26, 2014 ngo-11:01 PM
Isithuba esihle kodwa isixhobo endisithandayo yi-ahrefs 🙂
Jonga kwiMeta Forensics nayo: http://metaforensics.io. Sisixhobo esikwi-intanethi esifana nezixhobo zedesktop 'eScreaming Frog' kunye 'neXenu Link Sleuth'. Elona nqaku liphambili lomahluko kukuba ikwabonelela ngeengxelo ezineenkcukacha kuyilo lwewebhusayithi kwaye inika abasebenzisi ulwazi olusebenzayo malunga neengxaki ezinokwenzeka kwiwebhusayithi yabo.
Uluhlu oluhle kakhulu lweZixhobo ze-SEO…zange ndalubona ngaphambili..Enkosi kakhulu Douglas Karr
Ngaba ungajonga inkonzo yethu https://ranksonic.com kwaye wongeze kuluhlu lwakho?
Singabonelela wonke umrhumi we-Marketingtechblog ngesaphulelo 🙂
Uluhlu olukhulu! Iyoyikeka kakhulu ngazo zonke ezo zixhobo, kodwa ulibale iRankScanner-uyisebenzisa ngeveki, kwaye ilungile kulo naliphi na ishishini, mhlawumbi ngaphandle kwamashishini ndiyaqikelela. Ndacinga ukuba kufanelekile ukukhankanywa.
Jun 8, 2015 ngo-10:34 AM
I-RankSonic inika iziphumo ezinomdla ngexesha elifutshane kulo naliphi na ishishini kwaye unokulandelela inani elikhulu lamagama angundoqo. Ivakala kamnandi kum. Kwaye sisivumelwano sewebhusayithi yam. Kananjalo baneempawu ezininzi ezipholileyo.
Molo Douglas, singathanda ukuba nesixhobo sethu kolu luhlu ngokunjalo- http://www.siteoscope.com
NgoJulayi 15, 2015 ngo-4:55 PM
Yongeziwe! Ijongeka njengepakethe entle.
Ngokuqinisekileyo kunjalo, ukuba unomdla kwideshibhodi ndingahamba nawe ngayo 🙂
Ulwazi Oluhle ….Iluncedo Kakhulu kwabaqalayo…..Enkosi ngokusinika…
Okugqwesileyo, mandondise uluhlu lwakho ngesixhobo sophicotho sasimahla seo. http://seocamel.com
Yongeza uLarry! Enkosi.
Dec 29, 2015 ngo-10:58 PM
Inika umdla kakhulu, bendingayazi ukuba zininzi izixhobo ezikhoyo kwimarike… Ngoku ndiza kuhamba nganye nganye ndijonge ukuba banikezela ngantoni.
Uluhlu olukhulu Douglas! Ngaba ucinga ukuba inani lezixhobo ze-SEO liya kunciphisa njengoko imarike igcwele? Kubonakala ngathi wonke umntu wenza izixhobo namhlanje.
Iindleko zokungena ekwakheni isixhobo sakho ziphantsi kakhulu, andikholelwa ukuba kunjalo. Enyanisweni, sisebenza ngokwethu ngoku. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba uninzi lwezi zixhobo azikhange zihambelane ne-algorithms ngoko ke zinika ulwazi LWESIXEKO ezinokuthi zingavelisi ziphumo okanye zenzakalise inkampani ezisebenzisayo. Ingcebiso yam iya kuba kukuhlala ndifuna ubuchule bomcebisi we-SEO onemvelaphi eqinileyo.
Igcinwe kuluhlu lwamanqaku am. Enkosi. Kodwa ndinombuzo, ukuba uthetha ngesixhobo se-webmaster sikagoogle, kutheni ungakhankanywanga ngokubopha i-WMT kunye ne-yandex WMT? Ewe, ndiyazi ukuba kwabanye abantu google = yonke i-Intanethi, kodwa hayi wonke umntu. Ndiyazi abantu abaninzi abasebenzisa i-bing njengenjini yokukhangela engagqibekanga.
Olesya, linqaku elifanelekileyo.
Uluhlu oluluncedo kakhulu lwezixhobo ze-seo. Ndisebenzisa phantse ezi.
Bazalwane kunye nodade othandekayo, ungathanda ukuchaza malunga ne-baclink kwi-alexa.com?
le yiwebhu yam:
xa ndijonga kwi-alexa, kukho iwebhusayithi emi-2 kuphela edibanisa neofisi yam yewebhusayithi. nokuba, Mna kakhulu ukwenza i-akhawunti kwiiforam ingxoxo. ngoko ke inokuthi inxibelelane ixesha elingakanani neofisi yam yewebhusayithi. enkosi ngobubele bakho.
Abrar - AP Web Izisombululo
Zininzi izixhobo ezinkulu. I-SEM Rush yeyona nto ndiyithandayo xa kuziwa ekuthengiseni kwaye i-Majestic / Ahrefs zezona zidibanisa ikhonkco. Enye into endiyithanda kakhulu yiMozcast. Ayisisixhobo sobuchwephesha, kodwa kulungile ukuqinisekiswa xa ubona intshukumo eninzi kakhulu kwiiSERPs kwaye ufumanisa ukuba ayinguwe kwaye kukho uhlaziyo olukhulu oluqhubekayo-njengokuba bekunjalo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
I-SEO inkulu kakhulu kwaye ndisanda kuqala ukuba ngomnye. Ngokwenene kuninzi ekufuneka kufundwe. Ndiziva ndoyikeka ngoku, kakhulu ukuba ndingayetyisa. Uqale njani? Ngaba ukhe uzive ufuna ukulila ebuthongweni ngenxa yokuba ungaqinisekanga ukuba uya kuphumelela okanye awuyi kuphumelela?
Qala ngokuvelisa umxholo omkhulu kubaphulaphuli bakho. Ukukhangela lijelo, hayi iqhinga. Isicwangciso sakho kufuneka sibe kukuqhubeka nokubonelela ngexabiso kubathengi bakho kunye nabathengi.
Nov 8, 2017 ngo-9:18 AM
Uluhlu olukhulu Douglas, SERPtimizer sisixhobo se-seo esijikelezayo esinekhonkco lokukhangela elikhethekileyo kunye nohlalutyo lokhuphisana. Ngaba iya kuba yinto yokongezwa?
Olu luluhlu oluqaqambileyo- zonke izixhobo ezinkulu ezidweliswe kunye!
Ngaba isixhobo iCocolyze.com yinto enokongezwa? Sisixhobo sokulandelela isikhundla kunye nojongano oluhle kunye nedatha ethembekileyo. Kuya kuba nomdla ukubona ukuba wena okanye abanye abantu bacinga ntoni ngayo.
Ndiqaphele ukuba iMoz ayikho kuluhlu…? Kwakhona, ndisebenzisa inguqulo ehlawulwayo ye-BuzzSumo ukujonga i-backlinks.
NgoJulayi 31, 2019 ngo-1:30 PM
Wow, uxolo ndibashiyile abo. Enkosi kuFrank – ndiza kuzihlaziya ezi zinto. Omabini amaqonga abe luncedo kakhulu.
Molo Mazhar, oko kuxhomekeke ngokwenene kwinto ozama ukuyifumana. Ngaba uzama ukwenza indawo yakho ibe yezinga lezinto eziphilayo? Ngaba uzama ukukhuphisana kukhangelo oluhlawulelwayo? Ngaba uzama ukukhawulezisa indawo yakho? Ngaba uzama ukwenza uphando lomntu okhuphisana naye? Ziziphi iinjongo zakho?
Ingcebiso yam iya kuba kukuqala Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle (simahla) apho unokubhalisa indawo kwaye ubeke iliso kuyo nayiphi na imiba, sebenzisa Ukuqonda okunamaphepha ukuphucula ukusebenza kwendawo yakho (simahla) ngoko unganqwenela ukwenza i Uphicotho lwe-SEO, emva koko kufuneka wenze uhlalutyo oluthe ngqo lomkhuphisana kwaye usebenze ekwenzeni umxholo wephepha lakho ube ngcono kunabakhuphisana nabo. Ngenxa yoko, ndisebenzisa SEMrush.
Bendisebenzisa i-ahrefs kunye nezixhobo ze-SEO ze-Moz zasimahla kwaye ndicinga ukuba ezo zixhobo kufuneka zibe nezixhobo ze-SEO wonke umntu kufuneka azame. Enkosi ngenqaku elimangalisayo. Ndingathanda ukuyifumana njengoko ndijonge ukwazisa hub entsha yolwazi kwiwebhusayithi yethu ( Doodle Digital ). Enkosi!
Leyo yayiyiposi enolwazi.Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, bendikhangela isixhobo esifanelekileyo se-SEO ukulandelela ukusebenza kwam kwe-SEO. Uninzi lwezixhobo ozikhankanye zintsha kum. Enkosi ngokwabelana ngezixhobo zokulandelela amagama angundoqo. Kutshanje ndisebenzise isixhobo sokujonga iSERP, iSerpple. Unokuphinda uhlolisise isixhobo sokulandelela idatha yegama elingundoqo. Ukongeza, ngaba ungabhala inqaku elichaza izibonelelo zokusebenzisa isixhobo se-SERP Checker se-SEO kwiintsuku ezizayo. Oku kunokunceda abathengisi bedijithali abafana nam.
Enkosi uRachael, ndongeze uSerpple kuluhlu!
Phantse wonke umntu kuluhlu lwakho. Kodwa ndiyayithanda iGoogle isixhobo seGWM. Enye yezona zibalaseleyo. Bit the best for me
Ithe chatha kancinci, kodwa ndicinga ukuba iyaphucuka!